उसँग मेरो ‘ओरल यौन सम्पर्क ’ भएको थियो: मोडल स्मिता थापा ~ The Nepal Romania
उसँग मेरो ‘ओरल यौन सम्पर्क ’ भएको थियो: मोडल स्मिता थापा
9:27 AM अन्तर्वाता, कला No comments
दुनियाँ अजीव छ । एउटा व्यक्तिलाई जुन कुरा मन पर्दैन, अर्को व्यक्तिलाई त्यही कुरा राम्रो लाग्छ । कतिपय व्यक्ति परम्परा जोगाउन मरिमेट्छन्, कोही परम्परा तोड्नुलाई नै आफ्नो जीवनको उद्देश्य मान्छन् । केही वर्षअघिसम्म ब्राह्मणले सुँगुर छुँदा उसलाई परिवारबाट निकालिन्थ्यो वा चोख्याएर मात्र गृह प्रवेश गराइन्थ्यो । त्यसबेला केही पढेलेखेका ब्राह्मणले सुँगुरको मासु खाएर त्यसको विरोध गरेका थिए । यस्ता धेरै परम्परा तोडिँदै आएका कारण समाज आजको अवस्थासम्म आइपुगेको हो ।अहिले समाजमा नतोडिएको कुनै नियम छैन । यही नियम तोडिँदै जाँदा ‘एक नारी ब्रह्मचारी’ अहिले ‘अनेक नारी सर्वहारी’ भएको छ । यो नियम पुरुषमा मात्र लागू हुन्छ, महिलामा हुँदैन भन्ने मान्यता पनि अहिले तोडिन थालेको छ । अहिले पुरुषलाई खेलौनाका रूपमा प्रयोग गर्ने महिलाको संख्या उल्लेख्य देखिन थालेको छ । खोजी गर्दै जाँदा त्यस्ता सयौं युवती भेटिन्छन्, जो पुरुषलाई केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र मान्छन् । तिनै युवतीमध्ये एक हुन्— मोडल स्मिता थापासाप्ताहिकमा प्रकाशित हट ब्लोअपमध्ये सर्वाधिक चर्चित तस्बिरकी धनी स्मिता त्यस्ता युवतीहरूकी प्रतिनिधि हुन्, जो पुरुषलाई साधन मात्र मान्छिन् । महिलाको जीवन विवाह गर्न, सन्तान जन्माउन एवं घरधन्दा गर्ने मात्र हो भन्ने मान्यता राख्नेहरूका लागि स्मिताजस्ता युवती अराजक लाग्न सक्छन् । उनको विचारमा पुरुषले महिलामाथि मायाको नाममा आफ्नो शारीरिक आवश्यकता मात्र पूरा गरेको छ । यौन आवश्यकता पुरुषको मात्र अधिकारको कुरा होइन, यो
महिलालाई पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझेपछि उनले पनि पुरुषलाई त्यही रूपमा हेर्न थालेकी हुन् ।स्मिताले पहिलो पटक साप्ताहिकमार्फत आफ्ना केही व्यक्तिगत रहस्य सार्वजनिक गरेकी छिन् । आफ्नो ‘ब्रेस्ट’ ठूलो भएकै कारण धेरै पुरुष आफूप्रति आकषिर्त भएको उनको अनुमान छ । थापा जंगली जनावरजस्तै आक्रामक पुरुष मन पर्ने कुरा पनि निर्धक्क बताउँछिन् । करिब एक दशक लामो आफ्नो यौनजीवनमा सबै किसिमको आसनको अनुभव गरेको उनले बताइन् । लामो अनुभवपछि उनको निष्कर्ष छ- ‘यो जति खाए पनि नअघाइने अमृत फल रहेछ ।’ नक्सालस्थित बाबर्ची रेस्टुराँमा चम्किलो गाडीमा अन्तर्वार्ता दिन आएकी स्मिताले हि्वस्कीको पेग लिनुअघि नै खुला रूपमा आफ्नो विचार व्यक्त गर्न थालेकी थिइन् । हि्वस्कीको पेग बढ्दै जाँदा उनी अझ खुल्दै गइन् ।भनिन्छ, कतिपय पुरुष महिलालाई खेलौनाका रूपमा हेर्छन्, उनीहरू खेल्छन् र उपादेयता सकिएपछि फ्याँक्छन् । के यस्तै कुरा महिलाहरू पनि सोच्छन् ?सोच्छन्, किन सोच्दैनन् ? म त्यस्तै युवती हुँ । पुरुषहरू मेरा खेलौना हुन् । मेरो शरीरले इच्छा गर्दा उनीहरूलाई युज गर्छु । सकिएपछि त्यसको उपादेयता पनि सकिन्छ । कति पुरुषसँग संगत गर्नुभयो ? मैले १६ वर्षको उमेरदेखि पुरुषको संगत गर्दै आएकी छु । अहिलेसम्म कति पुगे होलान् भनेर गन्दा अल्मलिन्छु । धेरै पुगिसके, कति भन्नु ? -लामो हाँसो) । भनेपछि ती सबै खेलौना नै थिए ? पहिले त ती ड्रीम ब्वाइ नै थिए । पछि-पछि मलाई पुरुष भनेका खेलौना हुन् भन्ने लाग्न थाल्यो । यस्तो सोच कहिलेदेखि आयो ? पहिले शरीरको आवश्यकता पूरा गर्न सम्बन्ध राखें । कहिलेकाहीँ सम्बन्ध राख्दै जाँदा त्यो मायामा पनि परिणत भयो । मानिसको व्यवहार बुझ्दै जाँदा यो स्वार्थी जीव हो, यहाँ माया प्रेमको अर्थ छैन भन्ने कुरा जब मैले थाहा पाएँ त्यसयता मैले पनि पुरुषसँग ‘युज एन्ड थ्रो’ कै व्यवहार गर्न थालेकी छु । तपाईंको विचारमा पुरुष स्वार्थी कि महिला ? म महिला भएकीले महिलालाई किन स्वार्थी भनौं ? पुरुष नै स्वार्थी हुन्छन् । महिलाहरू मायामा पग्लिन्छन्, तर पुरुष पग्लिएको मैले पाइन् । म कुनै पुरुषको मायामा पर्दा उसले मसँग विवाह गरेन । मायामा पग्लिने भए त हाम्रो विवाह भैहाल्थ्यो नि । विवाह गर्ने अनुकूल अवस्था नहुन पनि सक्छ नि, विवाह नगर्ने बित्तिकै पुरुषलाई स्वार्थी भन्न मिल्छ ? पुरुषहरू विवाहअघि म जस्तै हट चाहँदा रहेछन् । गाडीमा राख्यो, घुमायो, मोजमस्ती गर्‍यो । जब विवाहको कुरा आउँछ, उनीहरूलाई घर सम्हाल्ने, सीधा-साधा युवती चाहिन्छ । विवाहअघि पनि गर्ने त्यही हो, पछि पनि त्यही हो । त्यसो भए व्यवहारचाहिँ किन फरक ? त्यही भएर मैले स्वार्थी भनेकी हुँ । किनभने तपाईंहरू जस्ता युवतीलाई उनीहरूले खर्च गरेका हुन्छन्, स्वार्थकै लागि संगत गरेका हुन्छन्, होइन र ? म कल गर्ल होइन । बरु मेरै पैसाबाट उनीहरूले मोज गरेका छन् । त्यस्ता युवती पनि होलान्, जसलाई खान-लाउन पुग्दैन, उनीहरूका लागि त्यसरी पैसा लिनु बाध्यता पनि होला, तर म त सम्पन्न घरकी युवती हुँ । मजस्ता खुला विचारका युवतीलाई देख्ने बित्तिकै समाजले गलत अर्थ लगाउँछ । हाम्रो समाजको धारणा नै गलत छ । तपाईं गाडी चढ्नुहुन्छ, फ्ल्याटमा बस्नुहुन्छ, कुनै काम नगरी यति ठूलो खर्च गर्ने, विचार र व्यवहार पनि त्यस्तै देखेपछि यस्तो सोच्नु स्वाभाविक नै हो नि, हो इन र ? म मेरो व्यक्तिगत जीवनमा फेमिली ब्याकग्राउन्डको कुरा गर्न चाहन्नँ । यद्यपि यति भन्छु, म महिनाको ४-५ लाख खर्च गर्ने क्षमता राख्छु । म बी टेक गरेकी शिक्षित एवं सक्षम युवती हुँ । तपाईंको जीवनको उद्देश्य के हो ? राम्रो मोडल बन्ने । खुसी साथ जीवन बिताउने । दुई-चारवटा एड गर्दा बजारबाट जुन रेस्पोन्स पाएँ, त्यसले मोडलिङमा रुचि बढ्दै गएको छ । बाँकी जीवन आफूले चाहे जस्तो गरी बिताउने । विशेषगरी नयाँ-नयाँ पुरुषसँग संगत गर्ने । सबैभन्दा पहिले पुरुषको संगत गर्नुभयो कि मोडल बन्ने चाहना राख्नुभयो ? म स्कुलमा फरवार्ड थिएँ । राम्रो नाच्थें र एक्टिङ गर्थें, तर १६ वर्षदेखि नै पुरुषको संगत पनि गर्न थाले । पहिलोपल्ट संगत गरेको पुरुषको सम्झना छ ? छ, मैले डान्समै उसलाई भेटेकी हुँ । उ २७ वर्ष जतिको थियो । उसँग मेरो ‘ओरल यौन सम्पर्क’ भएको थियो । त्यति सानो उमेरमा कसरी यस्तो कुरा थाहा पाउनुभयो ? त्यो आफैं थाहा पाउने कुरा हो । यौन सम्पर्क त नेचुरल कुरा हो नि, होइन र ? फेरि ऊ निकै अनुभवी मानिस थियो, उसले नै मलाई यौन सम्पर्कको महत्त्व सिकाएको हो । त्यो एक प्रकारको शोषण थियो भन्ने लाग्दैन ? अहिले आएर लाग्छ । किनभने उसले मेरो चाहना पूरा गर्दैनथ्यो । यद्यपि उसलाई सन्तुष्टि दिने क्रममा मलाई जुन आनन्द आउँथ्यो, त्यसबाट म सन्तुष्ट थिएँ । दोस्रो पुरुष पनि सम्झनुहुन्छ ? सम्झन्छु । त्यसबेला म १७ वर्षकी थिएँ । उसँग मेरो प्राकृतिक सम्पर्क भएको थियो । म पहिलो पटक साँच्चैकी युवती भएकी थिएँ । ऊ भने ३१ वर्षको थियो । तपाईंलाई पाको पुरुष नै मनपर्नुको कारण ? किनभने उनीहरू अनुभवी हुन्छन् । अर्को कुरा पाको मानिससँग उठबस गर्दा अरूले अनावश्यक शंका पनि गर्दैनन् । मैले अहिलेसम्म आफू सेफ साइडमा बसेर जीवन बिताएकी छु । अहिलेसम्म मैले गलत गरें भन्ने पश्चाताप छैन ? एकपल्ट ४० वर्षको पाको मानिस मलाई यति मनपर्‍यो कि उसलाई फकाउने क्रममा उसको कारमै हाम्रो सम्बन्ध भएको थियो । त्यसबेला उसले मेरा बारेमा के सोच्यो होला भन्ने पीर लागिरह्यो । मलाई लाग्यो मेरो शरीर आवश्यकताभन्दा बढी भोको छ । यो राम्रो कुरा होइन भन्ने लागेको थियो । तर त्यो बानी परिवर्तन भएन ? भएन, ऊ मबाट यति प्रभावित भयो कि मेरा लागि सबैथोक छाड्छु भन्न थाल्यो । उसको परिवार बिग्रने डर भएपछि म साइड लागें । किनभने उसका श्रीमती, छोरा-छोरी थिए । मेरो उद्देश्य ऊसँग सम्बन्ध राख्ने मात्र थियो, परिवार बिगार्ने थिएन । कति समयमा तपाईं केटा फेर्नुहुन्छ ? यति समय भन्ने छैन, तर एउटा पुरुषसँग संगत गर्दा अरू पुरुषसँग उठबस गर्दिन । मलाई मनै लाग्दैन । आफ्नो ब्वाइप|mेन्डमाथि अन्याय भएजस्तो लाग्छ । यौनसम्बन्धमा माया प्रेमको भूमिका हुनुपर्छ कि पर्दैन ? प्रेम र यौन सम्पर्क फरक कुरा हुन् । यद्यपि यौन सम्पर्कमा पे्रम भयो भने त्यो सुनौलो हुँदो रहेछ । नेपालीमा उखान छ नि, सुनमा सुगन्ध, प्रेम भएको अवस्थामा त्यही महत्त्व छ । यति लामो यौनजीवनमा कतिपटक सुनमा सुगन्ध महसुस गर्नुभयो ? एकपटक । केही वर्ष पहिले एकजना सञ्चारकर्मीसँग मेरो संगत भएको थियो । आफू सेफ हुन मैले उसँग संगत गरेकी थिएँ, तर एक वर्ष नबित्दै उसँग मेरो प्रेम हुन गयो । म उसको मायामा यति धेरै पग्लिएछु कि ऊसँग मात्र मैले तीन वर्ष संगत गरें । त्यसबेला मलाई लाग्यो, यौन सम्पर्कको आनन्द प्रेममा रहेछ, तर के गर्नु उसले मसँग विवाह गर्न मानेन । उसले विवाह गर्न नमान्नुको कारण के होला ? म उमेरले सानी भएँ रे । संगत गर्दाचाहिँ सानी नहुने, विवाह गर्दाचाहिँ सानी हुने ? म त्यसबेला खुब रोएकी थिएँ । त्यसो भए विवाह गरेर लाइफ सेटल गरे भैहाल्यो नि ? उसले धोका दिएपछि प्रेमप्रति मेरो विश्वास रहेन । त्यसपछि मैले पुरुषको भावनामा बग्नुहुन्न, बरु पुरुषलाई युज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझें । अब मलाई लोग्ने होइन, लोग्नेमानिस चाहिएको छ । सधैंभरि यस्तो जीवन कसरी चल्छ ? मलाई थाहा छ, मोडलिङको पनि आफ्नो उमेर हुन्छ । यसरी रमाइलो गर्नुको पनि एउटा समय हुन्छ । त्यसैले दुइटी धर्मपुत्री पाल्दैछु । एक करोडको लगानीमा एउटा बिजनेस सुरु गर्दैछु । आम्दानी भएको पैसाले समाजसेवा गर्छु । जसरी होस्, जीवन मोजमा बिताउँछु । अहिले मोडलिङमा मेरो चर्चा छ, भोलि समाजसेवामा मेरो नाम रहनेछ । विवाह नगरेपछि आफ्ना सन्तान हुँदैनन्, यसले एउटा महिलाको जीवन अपूरो भयो नि ? सन्तानका लागि विवाह किन गर्नुपर्‍यो र ? मलाई एउटा यस्तो लोग्नेमानिस चाहिएको छ, जो हेन्डसम होस्, असल व्यवहारको होस् । उसलाई म आफ्नो सन्तानको बुवा बनाउन चाहन्छु, तर त्यसमा उसको अधिकार हुनेछैन । त्यो मेरो मात्र सन्तान हुनेछ ।